प्रीयंकाको प्रेगनेन्सी : आफू पचाउन नसक्ने, दोष समाजलाई | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
प्रीयंकाको प्रेगनेन्सी : आफू पचाउन नसक्ने, दोष समाजलाई
त्यसो त हामी समाज परिवर्तन भयो भन्छौँ। विभेदको अन्त्य भयो पनि भन्छौँ। हामी चेतनशील प्राणी हो भनेर पनि भन्न भ्याउछौँ। हामी एक अर्कालाई माया गर्ने प्राणी अरे। हामि बुद्धिजीवी अरे। हामी सर्वश्रेष्ठ अरे। के यो सबै हामी व्यवहारमा पनि उतार्छौँ त?
केही समयदेखी अभिनेत्री प्रीयंका कार्कीको प्रेगनेन्सी चर्चामा छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता पनि दुइभागमा छुट्टिएका छन्। त्यसो त हरेक कुरामा सकारात्मक टिप्पणी गर्ने र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने हुन्छन् नै। यसमा पनि त्यही नै भएको हो। अभिनेत्री प्रीयंकालाई सपोर्ट गर्नेले ‘उनको खुसी हो। जे गरे पनि हुन्छ। त्यस्तो अपराध नै के गरिन् र ?’ भनेर भनिरहेका छन्।
उता, प्रीयंकाको प्रेगनेन्सिलाई जोक बनाउनेको हुल पनि बाक्लै छ। ‘प्रीयंकाले त हात्ती नै जन्माउन लागेर होला यत्रो नाटक गरेको’ भनेर भनिरहेका छन्। प्रीयंकाको नांगो पेटलाई त झन् के के हो, के के। भन्नू सम्म भनेका छन्।
क्लबहाउस, फेसबूक, इन्स्टा, ट्विटर, टिकटक, युट्युब जहाँ पनि प्रीयंकालाई गाली। क्लबहाउसमा त केहीले बहस समेत गरे। केही प्रयोगकर्ता प्रीयंका सहि छिन् भन्दै थिए। केही भने प्रीयंकालाई गलत भन्दै थिए। समाजले पचाउन नसक्ने चीज किन गर्नु भन्नेहरु पनि थिए। आफू पचाउन नसक्ने अनि दोष समाजलाई।
जे होस, प्रीयंका यतिबेला आफ्नो प्रेगनेन्सीमा रमाइरहेकी छिन्। बेबि सावर देखि दहि चिउरा कार्यक्रमहरुमा छल्किएको उनको खुसी मज्जाले अनुभुत गर्न सकिन्छ। आमा बन्न लागेकी एउटि महिलाको तस्बिर कसरी भल्गर देखे मानिसले? प्रेगनेन्ट प्रीयंका हुँदा व्यथा दुनियालाई लागेको छ। जे होस, प्रीयंका आमा बन्नै लागेकी छिन्। उनलाई र उनको परिवारलाई शुभकामना।
Previous articleप्रदीपको प्रश्न : प्रचार गरेरै समाजसेवा गर्नुपर्छ ?
Next articleमंसिरमा मिडिया अवार्ड, कमल भन्छन्-‘सर्ने र रोकिने संभावना छैन’
१७ श्रावण २०७८, आईतवार १५:५२
सुजन श्रेष्ठ - १७ श्रावण २०७८, आईतवार १५:५२